मुना २०६६ असार – मझेरी डट कम
बन्नुपर्छ ज्ञानी है
बिहान सूर्य उदाउँछ
बेलुकी यो अस्ताउँछ
वर्षा, शरद्, हिउँद
समयमा आउँछ ।
सीता भृकुटी बालकै हुन् जनक थिए बालक
रामकृष्ण बालकै हुन् श्रवणकुमार बालक
देवकोटा, सम, पारिजात यी पनि थिए बालक
आजका साना बालबालिका संसारका चालक ।
याद राखौँ खाँदा
सफाइ नै औषधि हो याद राखौँ सदा
खानेबेला हातमुख राख्नुपर्छ सफा ।
डुल्छ चरी वनैभरि काफल पाक्यो भन्दै
मान्छेलाई हर्ष लाग्छ उसको बोलि सुन्दै
बुद्धि, बानी वन्चरीको निस्वार्थकै हुन्छ
काफल पाक्यो, भन्दै डुल्दै झट्टै थाहा दिन्छ ।
अनिषा, विनिताको असल साथी थिई । उनीहरू एउटै कक्षामा पढ्दथे । घर पनि सँगसँगै जस्तो थियो । अनिषा सरल, मृदुभाषी, लगनशील र सहयोगी थिई । विनिता छुच्चो स्वभावकी थिई । अनिषा विनिताको दुःख-सुखमा साथ दिन्थी । विनिताको गृहकार्यमा सघाउनेदेखि कहिलेकाहीँ स्कुल जाँदा-आउँदा बस भाडासमेत तिरिदिने गर्दथी अनिषा । विनिता भने मौका पर्‍यो कि अरू साथीहरूसँग गएर कुरा काट्न थाली हाल्थी – बाबै अनिषा त कस्ती घमण्डी ! यस्ता उस्तालाई त मान्छे नै गन्दिन । त्योसित कोही पनि नमिल है ?
शैलजा र सपना बोर्डिङ स्कुलको कक्षा ८ मा पढ्छन् । उनीहरूबीच आपसमा धेरै मेल छ । बेला-बेलामा सपनाले राम्रा राम्रा कुरा ल्याएर देखाउँछिन् । मीठा मीठा क्याडवरी चकलेट ल्याएर शैलजासँग बाँडेर खान्छिन् र भन्छिन् – “यो मेरो मम्मी-ड्याडीले अमेरिकाबाट पठाइदिएको ।”